သိပ်ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဆိုတာ - Amawpyay
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေ တော်တော် များများက ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် အရမ်းကို ချစ်တတ် ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ဆိုတာကို မေ့နေလောက်အောင်အထိ ချစ်တဲ့ သူတွေ အပေါ်မှာ ကောင်းကြ တယ်။
ပေးဆပ်ကြ တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်ချစ်သလောက် ကိုယ်သိတတ်သလောက် ပြန်ပြီးမရ တာတွေလည်း ရှိတတ် ကြတယ်။ ချစ်တဲ့ အချိန်တွေ မှာဆိုရင် ဒီလူအတွက် ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး လုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ တွေးနေ တတ်ကြ ပါတယ်။
ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့ သူတွေ အပေါ်မှာတောင် အပြင်မှာသာ မုန်းတယ်ဆိုပြီးတွေးနေပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ သူအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုပြီး အမြဲတမ်းခေါင်းထဲ ထည့်ပြီး စဉ်းစားတတ်သေးတယ်။
အနေအေးသလို ဒေါသထွက်ပြီ ဆိုရင်လည်း ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ပါပဲ။ သနားတတ်တဲ့နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက် မရှိဘူး။ သနားတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့်ပဲ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်ပြန်ပြီးထိခိုက်တတ် ကြတယ်။
အစွဲအလမ်း အရမ်းကြီးတယ်။ ပစ္စည်းအစ လူအဆုံး အကုန်လုံးကို အစွဲအလမ်းကြီးတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတွေ ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်ဆို အကောင်းဆုံးပေးဆပ်
တတ်ကြပြီးတော့ ကိုယ့်ကို မကောင်းဘူး ထင်လို့ ထွက်သွားတဲ့ သူတွေနောက် ကိုတော့ အတင်းလိုက်ပြီး ဆွဲထားတတ်တဲ့ အကျင့် မရှိကြ ပါဘူး။
တော်ရုံတန်ရုံ သူ့အပေါ် မကောင်းတာကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ အပြုံးမပျက် ဆက်ဆံတတ်ကြသေး တယ်။ အမှတ်အတေး ကလည်း နည်း တယ်။ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေကို စိတ်ထဲမှာအမြဲ ရှိနေပေမယ့်
မုန်းတီးနေတဲ့ စိတ်တွေ ကတော့ အလွယ်တကူပဲမေ့ပျောက် သွားတတ် ကြတယ်။ စိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ အကုန်လုံးကို မပြီးမချင်း စိတ်ထဲထားပြီး အပင်ပန်းခံတယ်။
ဘယ်အရာကိုမှ လျှို့ဝှက် မထားတတ် ကြတာကလည်း သူတို့ရဲ့ပွင့်လင့်လွန်းတဲ့ စိတ်ကြောင့်ပါပဲ။ အားငယ် လွယ်တယ်၊ ဝမ်းနည်း လွယ်တယ်။ သူတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေ ကို သူများကိုပြောပြဖို့အတွက် အချိန်တော်တော် ကြာကြာ စဉ်းစားပြီး မှပြောတတ် ကြတယ်။
တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ပြီး ခံစားတတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်လို့ အပြင်ပန်းကြည့်ပြီး သူတို့ရဲ့စိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ ဆိုတာ တော်တော်မလွယ် ပါဘူးနော်။ မာကြောတယ် ထင်ရပေမယ့် တကယ်ကိုနှလုံးသားနု တဲ့သူတွေပါ။
တစ်ဖက်သားကိုလည်း အများကြီးချစ်ပေး တတ်ကြသလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အချစ်ခံချင်ကြ တဲ့သူတွေပါ။ အချစ်ကြီး လားဆိုပြန်တော့ လည်း သူများတွေလို သိသိသာသာကြီး ချစ်ပြနေ တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက် တည်းကြိတ်ပြီးပဲ အချစ်ကြီးတတ်တဲ့ သူတွေပါ။
ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးတှေ တျောတျော မြားမြားက ကိုယျ့မိသားစု၊ ကိုယျ့သူငယျခငျြး၊ ကိုယျ့ခဈြသူအပျေါ အရမျးကို ခဈြတတျ ကွပါတယျ။ ကိုယျ့အတှကျ ဆိုတာကို မနေ့လေောကျအောငျအထိ ခဈြတဲ့ သူတှေ အပျေါမှာ ကောငျးကွ တယျ။
ပေးဆပျကွ တယျ။ တဈခါတဈရံမှာ ကိုယျခဈြသလောကျ ကိုယျသိတတျသလောကျ ပွနျပွီးမရ တာတှလေညျး ရှိတတျ ကွတယျ။ ခဈြတဲ့ အခြိနျတှေ မှာဆိုရငျ ဒီလူအတှကျ ဘယျလိုအကောငျးဆုံး လုပျပေးရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ တှေးနေ တတျကွ ပါတယျ။
ကိုယျ့အပျေါမကောငျးတဲ့ သူတှေ အပျေါမှာတောငျ အပွငျမှာသာ မုနျးတယျဆိုပွီးတှေးနပေမေယျ့ စိတျထဲမှာ သူအဆငျပွရေဲ့လားဆိုပွီး အမွဲတမျးခေါငျးထဲ ထညျ့ပွီး စဉျးစားတတျသေးတယျ။
အနအေေးသလို ဒေါသထှကျပွီ ဆိုရငျလညျး ထိနျးမနိုငျ သိမျးမရ ပါပဲ။ သနားတတျတဲ့နရောမှာလညျး နှဈယောကျ မရှိဘူး။ သနားတတျတဲ့ စိတျကွောငျ့ပဲ ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယျပွနျပွီးထိခိုကျတတျ ကွတယျ။
အစှဲအလမျး အရမျးကွီးတယျ။ ပစ်စညျးအစ လူအဆုံး အကုနျလုံးကို အစှဲအလမျးကွီးတယျ။ ကိုယျခဈြတဲ့ သူတှေ ကိုယျ့အနားမှာ ရှိနတေဲ့ အခြိနျဆို အကောငျးဆုံးပေးဆပျ
တတျကွပွီးတော့ ကိုယျ့ကို မကောငျးဘူး ထငျလို့ ထှကျသှားတဲ့ သူတှနေောကျ ကိုတော့ အတငျးလိုကျပွီး ဆှဲထားတတျတဲ့ အကငျြ့ မရှိကွ ပါဘူး။
တျောရုံတနျရုံ သူ့အပျေါ မကောငျးတာကို ကွညျကွညျဖွူဖွူနဲ့ အပွုံးမပကျြ ဆကျဆံတတျကွသေး တယျ။ အမှတျအတေး ကလညျး နညျး တယျ။ ကိုယျ့အပျေါမကောငျးခဲ့တဲ့သူတှကေို စိတျထဲမှာအမွဲ ရှိနပေမေယျ့
မုနျးတီးနတေဲ့ စိတျတှေ ကတော့ အလှယျတကူပဲမပြေ့ောကျ သှားတတျ ကွတယျ။ စိတျထဲမှာမတငျမကဖြွဈနတေဲ့ ကိစ်စတှေ အကုနျလုံးကို မပွီးမခငျြး စိတျထဲထားပွီး အပငျပနျးခံတယျ။
ဘယျအရာကိုမှ လြှို့ဝှကျ မထားတတျ ကွတာကလညျး သူတို့ရဲ့ပှငျ့လငျ့လှနျးတဲ့ စိတျကွောငျ့ပါပဲ။ အားငယျ လှယျတယျ၊ ဝမျးနညျး လှယျတယျ။ သူတို့ရဲ့အခကျခဲတှေ ကို သူမြားကိုပွောပွဖို့အတှကျ အခြိနျတျောတျော ကွာကွာ စဉျးစားပွီး မှပွောတတျ ကွတယျ။
တဈယောကျတညျးကွိတျပွီး ခံစားတတျတဲ့ သူတှဖွေဈလို့ အပွငျပနျးကွညျ့ပွီး သူတို့ရဲ့စိတျကို ဆုံးဖွတျဖို့ဆိုတာ တျောတျောမလှယျ ပါဘူးနျော။ မာကွောတယျ ထငျရပမေယျ့ တကယျကိုနှလုံးသားနု တဲ့သူတှပေါ။
တဈဖကျသားကိုလညျး အမြားကွီးခဈြပေး တတျကွသလို ကိုယျကိုယျတိုငျလညျး အခဈြခံခငျြကွ တဲ့သူတှပေါ။ အခဈြကွီး လားဆိုပွနျတော့ လညျး သူမြားတှလေို သိသိသာသာကွီး ခဈြပွနေ တာမြိုးမဟုတျဘဲ တဈယောကျ တညျးကွိတျပွီးပဲ အခဈြကွီးတတျတဲ့ သူတှပေါ။
လူတိုင်းမသိသေးတဲ့ ကြာသပတေးသားသမီးအကြောင်း ကြာသပတေး သားသမီးများဟာ အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်တဲ့ သူများ ဖြစ်ကြတယ်။ ခွင့်လွတ် သီးခံတတ် ကြပါ တယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေရဲ့ ချစ်ခင်မှု ကိုလည်း တာရှည်ပိုင်ဆိုင် ထားကြတယ် မဟုတ်ရင် မခံတတ် တဲ့စိတ် ရှိတာလည်း ကြာသပတေးပါ။ ဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စတွေကို အမှန်တရား ဘက်က ရပ်တည် ကြတယ်။ မိသားစုထဲမှာ စကားများ ရန်ဖြစ်ကြ ရင်လည်း ကိုယ့်ဘက်က အရင်ဆုံး ကျေအေးပေး တတ်ကြတယ် အနစ်နာခံပေး တတ်တာ ကြာသပတေးပါ။ ကြာသပတေးများဟာ လူတွေ အပေါ် မေတ္တာ ထားတတ်တယ်။ ကိုယ့် မိသားစုထဲက လူတစ်ယောက်ယောက်ကို သံယောဇဉ် ရှိရှိနဲ့ …
24.9.2020 မှ 30.9.2020 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်ား
24.9.2020 မှ 30.9.2020 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်ား တနင်္ဂနွေ ယခုကာလ အတွင်း လက်ရှိ လုပ်ငန်းများ အပြင် ပူတွဲလုပ်ငန်း တာဝန် များကိုပါ စုပေါင်းလုပ်ကိုင် ထမ်းဆောင် နေရမည်။ ဆိုင်ခန်းဖွင့်ရန် ရည်ရွယ် ထားသူများ ယခုအပတ် အတွင်း မဖွင့်သင့်သေးသော အချိန်ကာလဖြစ် ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းများ ကြီးကြီးမားမား ဝယ်ယူခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်သေးပါ။ စာချုပ်၊ စာတမ်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း များ၊ အာမခံခြင်းများ မပြုလုပ် သင့်ပါ။ မိမိ၏ တစ်ဇွတ်ထိုး စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင် ရတတ် ပါသည်။ အလုပ်နှင့် ခရီးသွားရလျှင် အလုပ်အတွက် အဆင်ပြေ …
မြန်မာနိုင်ငံ အနာဂါတ်ဟောကိန်း ဆရာ လင်းညို့တာရာ
မြန်မာနိုင်ငံ အနာဂါတ်ဟောကိန်း ဆရာ လင်းညို့တာရာ မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာလာမေးကြတယ် ကျွန်တော် ကလည်း ဟောကိန်းတွေ ဟောချက်တွေ ဘာမှမပြောချင်တာနဲ့ ငြိမ်နေ ခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်သူများက သိချင်တယ် တစ်ကဲကဲ မို့ ဟောကိန်း အချို့ ထုတ်ပြပါရစေ။ ၁. ကိုဗစ်ရောဂါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနည်းဆုံး လူတစ်သောင်းဝန်းကျင်လောက် ကူးစက်သွားပါလိမ့် အုန်းမည်။ ၂. ပိတ်ပင်ထားသော မြို့များတွင် လည်း ထပ်မံတွေ့ ရှိ ရတတ်ပြီး စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်တတ်ပါလိမ့်မည်။ ၃. ပွဲလမ်း သဘင်များ အားလုံး ပိတ်ပင် ခံရပြီး ကိုဗစ်ရောဂါ အပြင် အခြားစိတ်ရောဂါများကြောင့် ၂၀၂၁ အတွင်း စိတ်ကျ သူများ …